Nanoparticle Volafotsy, Nanoparticle Copper, Nanotubes Carbon Multi Walled - Hongwu
Nanoparticle vy sarobidy
Colloidal vy sarobidy
Vovoka Nano Diamond
Nanotube karbonika marobe
Nanotube karbonika misy rindrina tokana
Nanotube karbonika misy rindrina roa
Nanotubes karbôna misy rindrina maro an'isa
Vovoka varahina mifono volafotsy
Nanoparticle Oksida vy
Nanoparticle Zinc Oxide
Nanoparticles Oxyde Cuprous
Nanoparticle oksida varahina
Nanoparticle Oxygère Aluminium
Nanoparticles Silicon Dioxide Nanoparticles
Vanadium Oxyde Nanoparticles
Nanoparticle Nickle Oxide
Nanopartikel Trioxide Antimony
Nanoparticle Odiôma Indium
Nanoparticle Oxygène Iron Magnetic
Nanoparticle Oxygène magnesium
Nanoparticle Oxygantant Tantalum
Nanoparticle Tin Oxide
YSZ Yttria miorina amin'ny Zirconia
Nanoparticle CeO2 Cerium Oxide
Powder Aluminium Nitride (AlN)
Nanowires varahina (CuNWs)
nirehareha isika famokarana, fonosana SY fivarotana ny vahaolana eto amintsika mandritra ny taona maro.
Hongwu dia manana ny fahefan'ny laboratoara fikarohana sy fampandrosoana efatra, ivon-toeram-panadinana, laboratoara fikarohana ampiharina ary tobim-pitsapana mpanamory fiaramanidina, manampahaizana manokana amin'ny varotra maro karazana nanoparticle anorganika sy fitaovana vaovao tamin'ny taonjato faha-21 hatramin'ny 2002. Izahay dia nitety tsena , manamboatra teknolojia manavao, ary manome vahaolana mamaky amin'ny alàlan'ny fahaiza-manaonay nanomaterial, manolo-tena hanavao ny tsy fahampian'ny fitaovana nentin-drazana.
hijery ny CATEGORIES lehibe
Azonao atao ny misafidy nanomaterial eny ivelan'ny talantalana na ampanjifaina mifanaraka amin'izay ilainao.
Mandresy amin'ny alàlan'ny miavaka
talenta ary fitaovana mandroso
Iraka ataon'i Hongwu: amin'ny maha mpamatsy matihanina amin'ny sehatry ny akora vaovao nano misy serivisy mifandraika amin'izany
Ny sandan'ny Hongwu: kalitao sy mpanjifa aloha, serivisy kilasy voalohany sy mendri-pitokisana.
Filôzôfia momba ny fitantanan'i Hongwu: fitantanana maodely, mifikitra amin'ny tsena, hamaly ny fangatahana mety amin'ny mpanjifa. Mifantoha amin'ny asanao amin'ny fambolena lalina sy ny fambolena tsara.
inona isika Aza
Manaraka ny sain'ny mpanjifa mifantoka amin'ny tsena, manome fahafaham-po ny fitakian'ny mpanjifa Hongwu, mifantoka amin'ny indostria, mamboly fatratra, mpamatsy matihanina sy mpamatsy serivisy mifandraika amin'ny sehatry ny fitaovana vaovao nano, ankoatry ny fanomezana vokatra mahazatra, izy io azo ampifanarahana amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana ihany koa. Hanohy hanatsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisy izahay, hanompo tsara kokoa ny mpanjifantsika avy any ivelany sy any ivelany, ary handresy.
Hongwu dia manana fitaovana famokarana mandroso, dingana dingana mandroso ary rafitra fanaraha-maso tonga lafatra. Amin'ny dingam-pamokarana, ny soatoavina ankapobeny an'ny orinasa amin'ny fampiharana ny kalitao aloha dia ampiharina. Mba hahazoana antoka fa milamina tanteraka ireo vokatra novokarina.
Hongwu dia manana ekipa R&D matihanina misy mpikaroka teknolojia nanotechnology efa za-draharaha sy injeniera zokiny, mpianatra doktorà ary profesora amin'ny famolavolana vokatra vaovao. Miaraka amin'ny Hongwu Research Institute sy ny oniversite ho fanohanana ara-teknika, manaraka akaiky ny fangatahan'ny tsena izahay ary manohy mamorona sy mamokatra fitaovana vaovao.
Ho an'ny fampandehanana tsara ny orinasa amin'ny ankapobeny dia manana ekipa mpiambina matihanina sy voaofana tsara izahay, ao anatin'izany ny loharanon-karena olombelona, ​​fitantanan-draharaha, fitantanam-bola, fividianana, lozisialy, ara-dalàna, ara-bola ary lafiny hafa hanomezana fiarovana feno, miasa daholo ny mpiara-miasa amin'ny orinasa miaraka, miasa mafy, amin'ny maro an'isa miaraka amin'ny fanohanan'ny mpanjifa avy any an-trano sy any ivelany, dia mamorona voninahitra vaovao hatrany izahay.
mafana indrindra Fampiharana
Fitaovana mpitroka Wave elektromagnetika
inona ny anay Nilaza ny mpanjifa
Nanao andrana fampitahana maromaro izahay ary nahazo valiny mahafa-po. Tsy ho ela dia handamina baiko vaovao ny departemanta mividy anay. Miomàna vovoka volafotsy 8-10kg ho anay ary alao antoka fa mitovy amin'ny baiko farany izy io. MISAOTRA
Tonga haingana be ary fitaovana tsara ampiasaina. Izahay izao dia mizaha izany amin'ny andiany ary hatreto dia mahomby tokoa, manantena aho fa hanampy fiarovana mandritra ny fotoana maharitra. Misy ranoka hafa na vovoka hafa anananao izay mety levona amin'ny solika / solvents / savoka izay hanampy azy hanavotra ny rano azontsika ampiasaina miaraka amin'ny vovo-sio2.
Ny nanopowder ZnO teo aloha dia mifanaraka amin'ny fampiharana anay. Ary hahazo 800kg indray isika. Alefaso azafady azafady momba izany sy 2000kgs azafady ary farito ny fotoana nitarihana. Misaotra anao.
Ho an'ny 100-200nm Si, ny 3kg farany dia mety tsara amin'ny fampiharana antsika. Izahay dia te-handefa kaomandy 20kg amin'ny volana ho avy, ary ny dingana manaraka dia 100kg. Azafady azafady ny vidiny tsara indrindra, koa ny fotoana fandefasana sy ny firaka 20kg sy 100kg, misaotra.
Hatreto aloha dia tsara ny fanandramana Pt nanopowder, mila 10g hafa isika hanaovana fitiliana sy fanombanana bebe kokoa ASAP. Alefaso azafady ny faktiora Proforma.
Fanontaniana momba ny vahaolana
Ny fampiharana indostrialy dia mifantoka amin'ny fanovana ny filàna ilaina. Nandritra ny roapolo taona lasa, manangana ny lazanay amin'ny indostrialy izahay avy amin'ny mpanjifanay amin'ny alàlan'ny kalitao tsy tapaka sy vahaolana tsara.
farany vaovao & bilaogy
avy amin'ny adminJul-06-2021
Nanomaterial kondetika sy antistatika ampiasaina amin'ny indostrian'ny lamba sy ny fibre simika
Ny fampandrosoana ny nanotechnology sy ny nanomaterial dia manome fomba sy hevitra vaovao amin'ny fitrandrahana ireo vokatra antistatika. Ny fitaritana, ny electromagnetic, ny faran'izay be mpitroka sy ny fantsom-pifandraisana nano, dia namorona fepetra vaovao ho an'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny conduc ...
avy amin'ny adminJun-24-2021
Miaraka amin'ny nanoparticle varahina cesium tungsten, tonga ny vanim-panafihana hafanana marani-tsaina!
Famonoana hafanana vera dia firakotra namboarina tamin'ny alàlan'ny fanodinana fitaovana vovoka nano na maromaro. Ireo nano-fitaovana ampiasaina dia manana toetra mampiavaka ny optika, izany hoe manana tahan'ny sakana avo any amin'ny faritra infrared sy ultraviolet, ary fandefasana avo any amin'ny faritra hazavana hita maso. Izahay ...
avy amin'ny adminJun-18-2021
Fitaovana nanoparticle sy seramika Piezoelectric
Ny keramika Piezoelectric dia karazana fitaovana seramika miasa izay afaka manova ny angovo mekanika sy angovo herinaratra. Vokatry ny piezoelektrika io. Ankoatry ny piezoelectricity, ny ceramika piezoelectric dia misy ihany koa ny diélectricité, ny elastika sns ... izay efa be ...
Ny ekipantsika dia mandeha lavitra hanome anao ny nanomaterial mahomby sy serivisy tsara indrindra. Mifandraisa aminay anio! Serivisy: Nanoparticle Metal Sarobidy, Nanoparticle Metal, Nanoparticle Oksida Metal, Nanotubes, Nanowires Ary Colloidal.
R307, Chuangkegu, No.43 Tangdong East Road, Distrikan'i Tianhe, Guangzhou
© Copyright - 2002-2020: Guangzhou Hongwu Material Technology Co., Ltd. Zo rehetra voatokana.